Lixabiso nasekuqiniseni iinxalenye zobhedu mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
I-Brass yintsimbi yobhedu ene-zinc njengeyona alloy iphambili kunye nezinto zokudibanisa izinto. "I-punch ebomvu" ngokwenene yinkqubo yokutshisa i-extrusion.
Isinyithi esingenantsimbi sakha ubhedu olwenziweyo olwenziwe ngobhedu
Inkqubo ebomvu Ukuhlukunyezwa yinkqubo yobungcali esele igqityiwe ngesiseko sokuchaneka kwanamhlanje kunye nokutshisa okutshisayo. Ngokuqhubela phambili koluntu kunye nophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, icandelo loomatshini libeke phambili iimfuno zamandla oomatshini ezintsha zecandelo loomatshini. Amacandelo ezicelo afaka ukuxolela kweenqwelomoya, iinjini zedizili, ukuxolela, ukuxolela kwiindawo ezahlukeneyo, ukuxolela elwandle, izixhobo zokuxolelwa, iipetrochemicals, ukuxolelwa kwemigodi, uxolelo lwamandla enyukliya.
Izinto eziluncedo zokwenza ubhedu iintsimbi ezingekho zentsimbi
-Phucula amandla oomatshini
-Iplastikhi elungileyo kubushushu begumbi kunye nobushushu obuphezulu
Uluhlu olunqabileyo lobushushu; ukuqhuba kakuhle kobushushu
Brass nasekuqiniseni nkqubo
1. Tshabalalisa ulwakhiwo olurhabaxa, lwenze ukutya okuziinkozo okuhle, kwaye ucofe izikhewu ezincinci kwindawo engenanto (yomeleza ukusondela) ukuphucula iipropathi zoomatshini kunye nobudala.
2.Ukufaka into engenanto kwiimilo ezahlukeneyo zemveliso kunye nentsimbi.
I-OEM eyenziwe ngesinyithi esenziwe ngesinyithi esineentsimbi zensimbi eyenziweyo-China yaseShanghai yobhedu engeyiyo eyentsimbi eyila iinxalenye zomenzi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ubhedu oluchanekileyo oluphezulu olwenziweyo olunomgangatho ozinzileyo noluthembekileyo lunokuqwalaselwa ngokweemfuno zabathengi. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kobhedu bokukhangela iinxalenye zomatshini. Ukongeza, iimveliso ezenziwe ngobhedu zibonelela ngokungqongqo ngokwemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngexabiso lobhedu olwenziweyo kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Zeziphi izinto ezenziwa ngamalungu obhedu obhedu
Ibrass ihlala isetyenziselwa ukwenza iivevvu, imibhobho yamanzi, imibhobho yokuqhagamshela izixhobo zomoya zangaphakathi nangaphandle, kunye neeradiya.
Izinto eziluncedo zeOuzhan Brass nasekuqiniseni Service
-Zonke iimveliso zobhedu oluchanekileyo ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokweemizobo okanye iisampulu zokwenza izinto zobhedu olwenziweyo.
Egqithileyo CNC ukujika iplastiki
Okulandelayo: I-OEM yentsimbi engenasici ejika iindawo ezizenzekelayo